We Fight We Win. -- " More than Media ": အမှန်တိုင်း တော့ သိစေချင် ပါသည်။
အမှန်တိုင်း တော့ သိစေချင် ပါသည်။
ရခုိုင်က သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေကို ယူသွားတာ
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ဆည်ကို နောက်သမတသက်တမ်းမှာ ပြန်လည်စတင်မှာ
မြန်မာ ပြည်က ကျွန်းသစ်တွေကိုယူသွားတာ
မြန်မာ အမျိုးသမီးလေးတွေကို တရုပ်နိင်ငံကို ရောင်းစားနေတာ
Muslim, Bengali and Rohingya don't loan Burma but Chinese do.
if so,also put Chinese together with them :)
if so,why not you put Chinese together with them in the list? :)
ဒါဆို ရခိုင်မလေးကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ရက်ရက်စက်စက်သတ်သွားတာ ဘယ်သူလဲ..အဲဒါက ပြသနာရဲ့ အဓိက တရားခံ..တခြားမဆိုင်တာတွေ ဆွဲမထည့်နဲ့မိုးသီး..မူဆလင်ကျွေးတဲ့ထမင်းစားနေရတာဆိုရင်လည်း ပါးစပ်ပိတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်နေ
This is my mistake to see this stupid website and stupid MOE THEE
အစက ခင်ဗျားကို လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း မဖြစ်စေချင်တဲ့သူလို့ ထင်နေတာ။ အခုတော့ ကျုပ်ထင်တာ တက်တက်စင်အောင်လွဲပြီ။ ခင်ဗျားက ကုလားကလွှဲပြီး ကျန်လူမျိုးတွေ သေချင်သလောက်သေ ကြေချင်သလောက်ကြေဆိုပုံစံဖြစ်နေပြီ။ ခင်ဗျားလိုလူ မြန်မာပြည်မှာမွေးခဲ့တာ ကျုပ်တိုင်းပြည်အတွက်ရှက်လဲရှက်တယ်..ရင်လဲနာတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားက ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်အတွက် အဆိပ်တခွက်ပဲ